Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fonony sy ny pejin'ny boky taloha - Ikkaro
firosoana >> boky >> Famerenana amin'ny laoniny ny boky taloha
Ny rafozam-baviko dia nanome ahy boky iray hatramin'ny fahazazany ny iray andro lasa izay. Io ilay nentin'izy ireo tany am-pianarana. Toy izany i Espana. Ilay boky dia niaraka tamin'ny fonony tamin'ny toe-javatra ratsy sy lamba maloto anatiny. Miala tsiny fa tsy mahita na inona na inona alohan'ny sary. Namboariko izy ireo fa tsy haiko hoe aiza izy ireo :-(
Boky ny didy jadona io. Nentin'ireo ankizy tany an-tsekoly izany ary an'ny an'ny Spanish School Publishing House. Ao anatiny no ahitantsika indoctrination madio. raharaha politika. Saingy heveriko fa manana ny lanjany ara-tantara io boky io ary toa heloka ny fanary azy.
Nahita azy toy izao aho. Vaky ny fonony, triatra ny hazondamosina ary malalaka ny pejy ao anatiny.
Tsy restaurateur aho ary tsy nanana ny filahako tadiaviko koa raha misy manam-pahaizana ao amin'ny efitrano dia mamelà ahy ary omeo hevitra ny zavatra mety ho nataony.
Famerenana amin'ny laoniny ny boky resahina
Ny zavatra nataoko voalohany dia ny lakaoly ny ravina anatiny. Nanafatra lamba malaso aho fa misy ary napetako toy ny hita eo amin'ny sary. Mihazona azy amina saka sasany mba tsy hihetsika izy. Tsy ilaina ny maka azy avy any aoriana any aoriana any raha tsy rehefa manindry miaraka amin'ny jacks dia misokatra ny hazondamosina. Nanampy ny tenako aho fa misy talantalana jamba sasany handrakofana ny faritra misimisy kokoa ary io no mety indrindra. raha vao mifamatotra tsara dia tsy maintsy apetrakao fotsiny.
La safidy lakaoly, lakaoly na binder lohahevitra iray lehibe izay tsy nanaovako ny safidy tsara indrindra. Lakaon'ny mpandrafitra no nampiasako satria malefaka izy io ary satria io no tao an-trano. Saingy afaka manova ny pH an'ny ravina izy io ary mahatonga azy io hanimba mandritra ny fotoana maharitra. Amin'ny faran'ny lahatsoratra dia mamela rohy vitsivitsy aho izay miresaka momba ny filaharana izy ireo ary mila mamaky tsara.
Ny famerenana amin'ny laoniny dia zavatra manana lanjany ara-pientanam-po fotsiny, ny boky dia tsy fahagola lehibe ary ny olana dia teo anelanelan'ny fanamboarana azy na ny fanariana azy.
Manaraka izany dia naka taratasy valopy volontany aho, mitovy amin'ny taratasy volontany io. ny lokony dia tsy diso fiarahana mihitsy ary toa matanjaka be koa.
Miala tsiny amin'ny kalitaon'ny sary. Io no hevitra, hanaronana an'io tafo tampon-trano io. Hosaronako taratasy ilay hazondamosina nifatotra. Ary ny fonony dia hamakivaky an'ity firakotra vaovao ity hahitana raha miaraka amin'ireo sary azoko hazavaina tsara kokoa.
Tsy te-hametaka mivantana ny hazondamosiko lamba aho teo amin'ilay sakana vita amin'ny taratasy nifatotra. Niraikitra tamin'ny vatan'ny ravina aho, saingy jereo fa tsy mandrorofy hatramin'ny farany aho fa mamela ampahany izay hopetahana amin'ny fonony, miaraka amin'io no omeko azy io ho an'ny fivezivezena bebe kokoa noho ny raha nopetahana ny zava-drehetra, dia ny taratasy voalohany no saika tsy misy ilana azy
Heteziko izao ny halava tafahoatra ary apetaho tsara ireo fonony.
Fanahafana ny mety ho izy.
Nampiasa lakaoly mpandrafitra aho, ka apetaka amin'ny andaniny roa, avela ho maina mandritra ny 10 minitra ary avy eo natambatra ireo faritra roa. tena mitandrina sy manala ny ampahany be loatra.
Ary tsara, izany no niafarany. Farafaharatsiny aorian'ny fikirakirany azy dia mandeha tsara izy, manokatra, manidy ary tsy misy ravina mivoaka. Manantena aho fa haharitra taona vitsivitsy ;-)
Mamatotra boky tsikelikely
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia efa miresaka ny fomba afatory boky, tetikasa na zavatra hafa amin'ny lamba. Tena mahaliana dia hanompo anao amin'ny zavatra maro.
Ao amin'ny tranomboky dia misy boky momba fatorana japoney nentim-paharazana. Manoratra azy aho hamaky azy io vetivety ary hilaza aminao ny fomba. Ho fanampin'ny fahitana ireo sombiny sy anaran'ilay boky, izay mandeha lavitra be.
Ary raha tianao ny lohahevitra manontolo momba ny nomerika sy ny famoronana boky, dia mety ho liana ianao https://www.ikkaro.com/como-digitalizar-libro/
Tail amin'ny famatorana
Mamela tranokala vitsivitsy tiako hojerena aho hahafantarako bebe kokoa momba an'io lohahevitra io. Mampanantena lahatsoratra iray momba an'io aho izay tena lohahevitra tiako horesahina.
Ny soso-kevitra, hevitra na fanamarihana rehetra dia tongasoa
Fiderana noho ny faharetan'ny Carl Honoré
Ahoana ny fanaovana katalaogin'ny tranombokiko boky
Ny sandan'ny demokrasia
Fianarana hianarana milina, fianarana lalina ...
Ilay tendrombohitra Mediteraneana. Torolàlana ho an'ny voajanahary
Sokajy boky, fanamboarana Ticket navigation
Tontolo manga. Ny fizotry ny ranomasina, ny ho avin'ny Tany
2 hevitra momba ny "Famerenana amin'ny laoniny ny boky taloha"
10 Novambra 2019 amin'ny 6:44 hariva
Salama, mila manamboatra boky izay maina loatra ny takelaka saika mangatsiaka aho, ahoana no hamahako azy?
8 Aogositra 2020 amin'ny 12:23 maraina
Torolàlana tena tsara, hotahiko io.
20 Oktobra 2020 amin'ny 12:59 alina
Salama maraina, voalohany nampahafantarinao ahy ny anarako dia Francisco Fernández, archivist aho, parochial, ary misy boky vitsivitsy manimba ny hazondamosina sy ny fonony, ahoana no hamerenako azy ireo, nolazaina aho fa misy ao amin'ny tsena, karazana hazondamosiko adhesive, mety, misaotra
1 Famerenana amin'ny laoniny ny boky resahina
2 Mamatotra boky tsikelikely
3 Tail amin'ny famatorana